Bit By Bit - Ukudala intsebenziswano yobuninzi - 5.2.3 Isiphelo
Intelekelelo Human lwenza ukuba iwaka abancedisi yophando.
Iiprojekthi zeenkcazo zoluntu zidibanisa umsebenzi wabaninzi abangenazo iingcali ukuxazulula iingxaki ezinzima-ezinkulu-ingxaki ezingakhange zixazululwe kalula ngeekhomputha. Basebenzisa isicwangciso sokudibanisa-sisebenzisana ukuhlula ingxaki enkulu kwiindawo ezininzi ezilula ezinokusombulula abantu abangenazo izakhono ezizodwa. Iinkqubo zokuncedisa iikhomputha zoluntu zisebenzisa kwakhona ukufunda kumashishini ukwenzela ukukhulisa umzamo wabantu.
Kuphando lwezeNtlalo, iiprojekthi zeenkqubela zabantu ziyakuthi zisetyenziswe kwiimeko apho abaphandi bafuna ukuluhlu, ikhowudi, okanye iileta imifanekiso, ividiyo, okanye iitekisi. Ezi zihlomelo ngokuqhelekileyo aziyiyo imveliso yokugqibela yophando; kunoko zizinto eziluhlaza zokuhlalutya. Ngokomzekelo, ukubhalwa kweenkcukacha zeentlobo zezobupolitiko ezibonakalayo zingasetyenziswa njengenxalenye yohlalutyo malunga neengqinamba zeengxoxo zezopolitiko. Ezi ntlobo ze-microtasks ziyakwazi ukusebenza ngokusemandleni xa zingasidingi uqeqesho olukhethekileyo kwaye xa kukho imvumelwano ebanzi malunga nempendulo echanekileyo. Ukuba umsebenzi wokuhlelwa ngokuzikhethela-ungathi, "Ngaba le ndaba ibanjwe ingqalelo?" - ke kubaluleke kakhulu ukuqonda ukuba ngubani othabatha inxaxheba kunye nokuba yiziphi izinto ezingenako ukuzenza. Ekugqibeleni, umgangatho wokuveliswa kweeprojekthi zeenkalo zabantu zixhomekeke kumgangatho weziphumo ezithathwa ngabantu abathatha inxaxheba: udoti, udoti ngaphandle.
Ukuze uqhubeke nokwakha i-intuition yakho, itheyibhile 5.1 inikeza imizekelo eyongeziweyo yendlela ukubala komntu kusetyenziswe ngayo uphando loluntu. Le tafile ibonisa ukuba, ngokungafani neGalaxy Zoo, ezinye iiprojekthi zeenkomfa zoluntu zisebenzisa iimveliso ze-microtask zemakethe (umz., I-Amazon Mechanical Turk) kwaye zithembele kubasebenzi abahlawulelwayo kunokuba bavolontiya. Ndiza kubuya kule ngxaki yefuthe xa ndibonelela ngcebiso malunga nokudala iprojekthi yakho yobambiswano yobuninzi.
Itheyibhile 5.1: Imizekelo yoPhuhliso lweeNkcukacha zoLuntu kwiPhando loLuntu
Ikhowudi yezopolitiko zemicimbi yezopolitiko Umbhalo Iimakethe zabasebenzi be-Microtask Benoit et al. (2016)
Ukukhupha ulwazi lwezehlakalo ukusuka kumanqaku eendaba kwi-Occupy Protests kumadolophu angama-200 ase-US Umbhalo Iimakethe zabasebenzi be-Microtask Adams (2016)
Hlela amanqaku epapasho Umbhalo Iimakethe zabasebenzi be-Microtask Budak, Goel, and Rao (2016)
Ukukhupha ulwazi lomcimbi kwiidayari zamajoni kwiMfazwe Yehlabathi 1 Umbhalo Amavolontiya Grayson (2016)
Khangela utshintsho kwiimephu Imifanekiso Iimakethe zabasebenzi be-Microtask Soeller et al. (2016)
Khangela i-algorithmic coding Umbhalo Iimakethe zabasebenzi be-Microtask Porter, Verdery, and Gaddis (2016)
Okokugqibela, imizekelo kweli candelo zibonisa ukuba intelekelelo babantu kuba nefuthe intathonxaxheba kwinzululwazi. Khumbula, ukuba Schawinski kunye Lintott kwakukho abafundi enomsila xa aqalisa Galaxy Zoo. Phambi kweminyaka yesuntswana, iprojekthi lihlele wocalulo izigidi kumnyele ebezinokufuna ixesha elininzi kunye nemali ukuba kwakuya kuba yeyona kuphela ababhaqe kakuhle kwaye oonjingalwazi nomonde. Yiloo nto. iiprojekthi kubalwa Human ukudibanisa umsebenzi ezininzi non-iingcali ukusombulula iingxaki lula-umsebenzi-ezinkulu-scale. Okulandelayo, ndiza kukubonisa ukuba intsebenziswano ubunzima nazo isentyenziswa kwiingxaki ezifuna ubugcisa, ubugcisa ukuba umphandi ngokwakhe akukho.